Iindaba -Ukucoca izinto zensimbi ezingenanto
Isihluzo esiveliswe ngumenzi weplanga yensimbi engenasici inoluhlu olubanzi lwezicelo, kwaye iimveliso ezininzi zisetyenziswa njengesihluzi semithombo yeendaba. Isixhobo secebo lokucoca esiveliswa ngumenzi wesixhobo esenziwe ngentsimbi engenasici senziwe ngetambo yocingo; ngamanye amaxesha umbindi wesikrini uxutywe ngombala oxineneyo ukuphucula amandla. Ekuqaleni, isihluzo esiveliswe ngumenzi weplanga yentsimbi engenasici yayisetyenziselwa ukuhluza igesi. Isizathu esingathathelwa ngqalelo kulwelo lokucoca ulwelo kukuba ubungakanani bento yecebo lokucoca ulwelo aluzinzanga kwaye luya kuba banzi phantsi koxinzelelo olukhulu lokucoca ulwelo. Nangona kunjalo, kule minyaka idlulileyo, itekhnoloji yentsimbi eshinyeneyo yento eqinisekisiweyo yeefilitha yenze inkqubela phambili enkulu. Umzekelo, ukuphucula ubungakanani bendawo yokuhluza, obu buchwephesha bulandelayo busetyenziswa:
Phezu kwendawo yecebo lokucoca ulwelo, ifayibha encinci yokwala ibekwe kumphezulu wokucoca ulwelo; umphezulu weemvakalelo uphathwa ngokugqitywa ngokugudileyo; kwaye (3) kusetyenziswe ilaphu elingcono nelomeleleyo elishinyeneyo.
Emva kokwamkela obu buchwephesha butsha, umda wesicelo secandelo lokucoca ulwandiso. Ingasetyenziselwa kungekuphela kwifilitha yokususa uthuli olusebenzayo, kodwa nakwisixhobo sokucoca ulwelo (njengohlobo lwediski, uhlobo lwegubu kunye nohlobo lokucoca ulwelo lwebhanti). Ukongeza, isihluzo se-elementi esiveliswe ngumenzi we-grade grade ye-stainless steel filter iye yasetyenziswa kwisihluzi soxinzelelo lokucoca ukutya kunye neyeza.